Soo dejisan Manycam 7.4.1.16 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Manycam
Manycam – software ah in ay ballaariso functionalities marka la webcam a shaqeeya. software The falgala codsiyada caanka ah kuwaas oo bixiya isgaarsiinta cod ama video ah oo ay taageertaa daayey on channels duwan oo isku mar. Manycam ku jira saamaynta badan muuqaal ah in la beddelo asalka, muujiyaan watermark ah, ku dar accessories iyo qaybo ka mid ah wajiga duwan. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u dalbato saamaynta audio si loo badalo codka. Sidoo kale Manycam taageertaa hab gaar ah si ay u baahin il video oo laga helay ilo kala duwan isku mar ah.
Broadcasting in codsiyada badan isku mar
Isku geynta ee accessories for wajiga
Abuur saamaynta adiga kuu gaar ah
Soo dejisan Manycam
Faallo ku saabsan Manycam
Manycam Xirfadaha la xiriira
eViacam – barnaamij caawimaad leh oo lagu maareeyo tilmaameha jiirka iyada oo loo maro websaydh maamusha socodka dhaqdhaqaaqa madaxa ee kuu oggolaanaya inaad u dhaqaaqdid tilmaameha meesha aad rabto ee shaashadda.
software The caansan waxaa diiradda lagu saaray abuurista ee isgaarsiinta ugu madadaalo on webcam ah. software waxa uu leeyahay tiro badan oo ah saamaynta muuqaalka kala duwan.
FlashGet – maamule awood leh oo faylasha ka soo dejisa internetka. Software-ka wuxuu taageeraa borotokoolno kala duwan wuxuuna bixiyaa iskaanka fayriska ee faylasha la soo degsaday.
JoyToKey – waa barnaamij lagu daydo shaqada jiirka iyo furaha iyadoo la adeegsanayo joysticks-ka ciyaarta. Software-ka wuxuu taageeraa qaabeynta iskudhafka muhiimka ah ee keyboard-ka ama jiirka wuxuuna bixiyaa sida ugu dhaqsaha badan ugudambiska joystick-ka.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu ogaado qalabka ku xiran shabakada. Kadib marka baaritaanka la dhammeeyo, isticmaaluhu wuxuu helayaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qalab kasta oo la helay.
ConvertXtoDVD – waa fududahay in la isticmaalo softiweer si loogu beddelo fiidiyoowga qaab DVD ah. Software-ku wuxuu leeyahay aalado wax lagu saxayo laguna hagaajiyo dejimaha faylasha fiidiyowga.